China bisikileta an-tendrombohitra avo lenta 26 inch ho an'ny lehilahy / mpanamboatra bisikileta bisikileta OEM mpanamboatra sy mpamatsy | Beimudou
bisikileta an-tendrombohitra avo lenta 26 inch ho an'ny lehilahy / bisikileta bisikileta OEM
Ny bisikileta an-tendrombohitra dia misy haingam-pandeha 11, 18, 20, 21, 24, 27 ary 30.
Ny fampiasana marina ny fandefasana, afaka miatrika ny lalana fisaka, ny fidinana ambony sy ambany, ny lalana maloto, ny lalan-drivotra ary ny toe-piainana sarotra sy ny toetr'andro, izay haingana kokoa noho ny bisikileta mahazatra.
Sarin'ny bisikileta Mpitroka manaitra tampoka vy karbonika 26 '* 400l faran'ny tendron'ny 44 * 120l
Fitaovana bisikileta Fitrohana vy / hatairana 26 '* 31.8 * 28.6 * 200mm
Rim bisikileta < Alim-bolo vita amin'ny alimika alimina aluminium
rayons 14g * 45 #
Toeram-bisikileta Loza vy / firaka 36
Kodiarana bisikileta 26 '* 2.125 A / V
Fantsona anaty bisikileta 26 '* 1.75 / 1.95
Bisikileta deraileur Kitapo hafainganam-pandeha 21-24
Crankset Steel / firaka 24 * 34 * 42 nify / 170L sakany tarihiny
Famakiana bisikileta Firaka, famahanana kapila F: 160/140 R: 160/180
Andalana bisikileta Bara vy / firaka
Tso-bisikileta Tavy / firaka 28.6 * 150mm T: 1.4mm
Lasely bisikileta MTB haben'ny seza ahazoana aina: 255 * 155mm
Bisikileta bisikileta PVC board 94 * 79 * 29mm
Ny tombony amin'ny bisikileta an-tendrombohitra:
Kodiarana midadasika, tantanana mahitsy, fanintonana hatairana aloha sy aoriana, mitaingina mahazo aina kokoa;
Henjana avo, mandeha mora miovaova;
Miaraka amin'ny alikaola, ny fanoherana ny seismika amin'ny kodiarana tsara, ny hamafin'ny fitaovana, ny hamafin'ny paingotra ary ny eny amoron'ny hantsana aza dia afaka mandeha tsara ihany koa.
Ny bisikileta mahazatra dia fitaovam-pitaterana madio fotsiny, tsy afaka hahatratra ny tanjon'ny fananganana vatana matanjaka ny bisikileta mahazatra, ary hafa ny bisikileta an-tendrombohitra, an'ny sehatry ny fitaovam-panatanjahan-tena, afaka manolo ny fitaovam-pitaterana ho fitaovana fanatanjahan-tena tsara.
Tsara ny fampisehoana, raha misafidy mitaingina tendrombohitra na lalana an-tendrombohitra goavambe ianao dia tena mandaitra ny bisikileta an-tanana. afaka mitondra fitsaharana ara-batana ho an'ny mpitaingina.
Etsy ankilany, ny hafainganam-pandehan'ny bisikileta an-tendrombohitra dia tsara kokoa. Izy io dia mitazona ny mpitaingin-tsoavaly ho matanjaka. Faharoa, mahazo aina tsara ny mitaingina. Amin'ny alàlan'ny fampiasana bisikileta an-tendrombohitra dia afaka mahazo fiononana ireo mpitaingina.
Fihenan'ny bisikileta an-tendrombohitra:
Kodiarana midadasika, fanoherana lehibe, haingam-pandeha dia somary miadana;
Kely dia kely ny seza, ary ny tanjaka ampiasaina dia ny fanohanana ny tongotra, ny feny, ny zanak'omby, ny andilana ary ny sandry. Mandreraka ny mitaingina lava.
Teo aloha: Bisikileta MTB 26 inch / bisikileta an-tendrombohitra avo vy
Manaraka: Ankizy Ankizy Bisikileta amin'ny bisikileta / bisikileta 14 santimetatra ho an'ny ankizy
Bisikilety an-tendrombohitra 29 Inch
Bisikileta Mountain Boy
Bike bisikileta ankizy
Bisikileta fandanjalanjana mavokely, Bisikileta fandanjana ankizy, Bisikileta, Bisikileta mandanjalanja, Bisikileta mandanjalanja, Bisikileta / bisikileta 20 santimetatra,